Terms & Fepetra Alatsinainy Match - 50% mitovy hatramin'ny £ 100 |
Terms & Fepetra Alatsinainy Match - 50% mitovy hatramin'ny £ 100
Fisondrotana io dia ho mavitrika eo amin'ny faha-9, 16faha, 23RD sy ny 30 Janoary 2017 (GMT).GMT no mitovy amin'ny ACST -9.30hrs, ITY -1hr, PTZ + 8hrsTo ho afaka ny tombony, mpilalao dia tsy maintsy hametraka farafahakeliny ny £ 10.
A tombony ny 50% ny voalohany panahin'ny tahirim-andro izany ho any amin'ny faratampony ny £ 100 hanampy ho amin'ny kaontinao.
Tombontsoa dia afaka mitondra any 3 andro fiasana ny avy amin'ny faran'ny ny fampiroboroboana mba ho nisaina ny tantara.
Standard wagering zavatra takian'ny 30x ny tombony vola ampiharina eo anoloan'ny tombony na mifanaraka winnings azo withdrawn.Bonus nahazo vola avy izany fisondrotana, ihany no ampiasaina mba hilalao eo amin'ny slot lalao.
Ihany wagers natao tamin'ny lalao Real vola no anjara manoloana ny wagering takina.
Wagers natao tamin'ny Play Fa Free lalao dia tsy isaina ho any ny wagering takina.
Rehefa nisaotra ny tombony mbola manan-kery ho an'ny 28 andro.
Tokony tsy vita ny wagering fepetra takiana ao amin'io vanim-potoana, tombony vola sisa dia hesorina avy amin'ny kaonty.
Mpilalao ireo ary tsaroako fa ny iray ihany dia afaka ny ho mpanao tombony na oviana na indray mandeha, masìna ianao, mankanesa any “ny kaontiko” fizarana hijery ny tombony manontolo filaharana.